An Asian Tour Operator: နှစ်သစ် မင်္ဂလာ နှင့် မြန်မာ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
နှစ်သစ် မင်္ဂလာ နှင့် မြန်မာ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင် အာရှမှာ အလှဆုံး နိုင်ငံထဲ က တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မြင့်မားသည့် ယဉ်ကျေးမှူ့ဓလေ့ထုံးစံများ၊ သမိုင်းအစဉ်အလာနှင့် ရေမြေတောတောင် သဘာဝ အလှ အပြင်ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲအ ကြွယ်ဝ ဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သော်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု့မှာ အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံ အတွင်း အဆင့် ၉ မျှသာ ရပ်တည်နိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသအတွင်း တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကို အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ကိုင်နေကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ရရှိသော ၀င်ငွေမှာ အနည်းဆုံး ပမာဏမျှသာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ရည်တိ၊ုရည်ရှည် စီမံကိန်းများချမှတ်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းကာ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်သေးပေ။
နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အား ပိုမိုအာရုံစိုက်၍ လုံလောက်သော ဘဏ္ဍာငွေများ စိုက်ထုပ်ပြီး ခရီးသွားမြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များ (လေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ လမ်း၊ တံတား စသည်) တို့ လုံလောက်ပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာ ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးနိုင်စေရေး အတွက် သာမက နိုင်ငံတကာခရီးသွား ဧည့်သည်များ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက် စေရေးအတွက် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်၊ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ စသည် တို့ ကိုပါ တဆင့်ခြင်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
နိုင်ငံ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အတွက် ဒေသအတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း အောင်မြင်နေသော မလေးရှား နိုင်ငံ (၂၀၁၀ ခုနှစ် အတွင်း ခရီးသည် ၀င်ရောက်မှု့ ၂၄.၅၇၇ သန်း) နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ (၂၀၁၀ ခုနှစ် အတွင်း ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှု့ ၁၅.၉၃၆ သန်း) တို့ ၏ နည်းလမ်းများ ကို အတုယူ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ ထို့ အပြင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန မှ ကြီးကြပ်၍ အထက်ပါ နိုင်ငံများ နှင့် သင့်တော်သော အခြား နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များ၊ ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း သင်တန်းများ သို့ စေလွှတ် ကာ တက်ရောက်လေ့လာစေသင့်ပါသည်။ ၄င်းမှ တဆင့် Train the Trainer အစီအစဉ်မျိုးများ ဖြင့် ပြည်တွင်း တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များ တွင်လည်း ခရီးသွား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အသိပညာများ အား အခြေခံပညာအဆင့် ကျောင်းသား လူငယ်များ ထိတွေ့ လေ့လာသိရှိစေရန် အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း များတွင် ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ များတွင် ပညာပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ခရီးသွား လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်းနှင့် သာပတ်သက်သော လုပ်ငန်းမဟုတ်ပဲ အလွန်ကျယ်ပြန့် သော လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုဖြစ်ရာ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ အပြင် ပြည်သူလူထု အားလုံးပါ ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ရန်လို အပ်ပါသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ သဘောသဘာဝ မှာ နိုင်ငံခြားခရီးသည် တစ်ဦးချင်း ဆက်စပ် ပါတ်သက်သူမှန်သမျှ ဒေသခံ အားလုံး အတွက် အကျိုးရှိစေရာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု့ ပပျောက်အောင် တိုက်ဖျက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်း ကြီး တစ်ခုဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော် ခေတ်မီဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက် အလွန်အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုသူ တိုးအော်ပရေတာ တစ်ဦး အနေဖြင့် တိုက်တွန်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ ။
မှတ်ချက်။ ။ မရှင်းပါက ပုံအပေါ်ကို နှိပ်၍ ကြည့်ပါရန်။
Posted by An Asian Tour Operator at 12/16/2011 03:36:00 PM
Labels: Myanmar, Tourism, မြန်မာပို့စ် Tourim
အေသင် (ဝေါ) said...
Tourism ဆိုတာ သိသူဖေါ်စား၊ မသိသူ ကျော်သွားဘဲ အစ်ကိုရေ။
ရှိထားတဲ့ resources တွေအပေါ် Innovation လုပ်ရုံနဲ့တိုင်းပြည်အတွက် အဓိက ၀င်ငွေရှာပေးနိုင်တဲ့ Industry ကြီး ဖြစ်လာမှာမို့ ပိုမို အာရုံစိုက် ပံ့ပိုးပေးဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း။
5:55 PM, December 16, 2011
မပေါ်လာ အတော်ကြာပြီ ... ခုမှပဲ စာဖတ်ရတော့တယ်၊ ခရီးသွား အာမခံအကြောင်းလည်း အားရင် ရေးပါအုံး ...
ကိုရင် ဘယ်က ရေးနေတာတုန်းဗျ။ ပြန်ရောက်လာဘီလား။
7:30 PM, December 16, 2011
ဒါပေ့ါ ဒါပေါ့ ဟုတ်တာပေါ့ :)
8:08 PM, December 16, 2011
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့တောင် အာရှမှာတင် မဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာ့အလှဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါရမှာ... ခုတော့ တကယ် နှမြောဖို့ ကောင်းတယ်...အစ်ကို...
11:14 PM, December 16, 2011
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Tourism လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဆိုတာလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ တည်ဆောက်ပိုင်ခွင့်တွေ တစ်ဦးတည်းကို မပေးဘဲ အားလုံးကိုညီတူမျှတူ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ လူတစ်ဦးတည်းကသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ချုပ်ကိုင်ထားရင်တော့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မလွယ်လှသေးပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝေးလံသီခေါင်လှတဲ့နေရာတွေမှာာ လူသိအင်မတန်နည်းနေသေးတဲ့ သဘာဝအလှတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ ဖော်ထုတ်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။
7:34 PM, December 18, 2011
ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ မရှိတာတွေကို တမ်းတမှန်းဆပြီး ရှိအောင်လုပ်ဖို့ အိပ်မက်တွေ မက်နေမယ့်အစား...ကိုယ့်မှာ ရှိပြီးသား သဘာဝတရားအလှနဲ့ စီးပွားလုပ်သင့်တာပေါ့...ရာသီမျိုးစုံ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မျိုးစုံ၊ မပျက်စီးသေးတဲ့ အလှတရားတွေဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ကုန်ကြမ်းတွေ မဟုတ်လား...ဒါ့အပြင် မြန်မာတွေရဲ့ ဖော်ရွေပျူငှာမှုဆိုတာကလည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အားဖြည့်ပေးနေတဲ့ အဓိကအချက်ပါပဲလေ...အဲဒါတွေကို ကုန်ချောဖြစ်ဖို့ ထိုက်သင့်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးနိုင်ရင် ထင်တာထက်ကို အများကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့ တစ်ထစ်ချယူဆမိပါတယ်...
အဲဒီအချိန်မျိုးရောက်ရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း တိုးဂိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုးအေဂျင်စီပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဦးမယ်ဗျာ...ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့...
10:46 AM, December 19, 2011
Simply the best tourism educational post, i already demanded this to Travel Myanmar Group for others to read. This will help tourism Dummies to think about it, haveaclue about it, review and work on it.
12:42 PM, December 19, 2011
ထိုင်းနိုင်တောင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့... အများကြိးတိုးတက်နေတာ ဆိုတော့... မြန်မာနိုင်ငံကိုလဲ အများကြိး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်...။
4:12 PM, December 20, 2011
ဖြစ်စေချင်တယ် . . တကယ်ကို ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ တိုးတတ်နေတာ လူတိုင်း လိုချင်တာပေါ့။
3:44 AM, December 27, 2011
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရော အားလုံးအားလုံး မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ထိပ်ဆုံး မှာ ရှိစေချင်တယ် အခုတော့ ပြောင်းလာနေပြီထင်တာဘဲ
11:09 PM, December 28, 2011